April Festivals – Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
Discover exciting festivals that represent Myanmar’s rich culture, traditions and customs. Each festival is made memorable and fun by the whole hearted participation of locals. Join them in thier celebrations and witness beautiful parades of offerings, lights, hot air balloons and even interesting performances in the festivals of Myanmar.
ကျင်းပသည့်ကာလ – ဧပြီလကုန်(သင်္ကြန်ပွဲပြီးနောက်)
ကျင်းပသည့်နေရာ – မြိတ်ကျွန်းစု။
ထူခြားမှုများ – ဆလုံလူမျိုးများ ခြောက်သွေ့သောရာသီဉတုကိုရှောင်ရှားရန် ပင်လယ်သို့ ထွက်ခွာ သောအချိန်၌ ဆလုံပွဲတော်ကိုကျင်းပရန်အချိန်သတ်မှတ်ကြပါသည်။
ဆလုံလူမျိုးများ ခြောက်သွေ့သောရာသီဉတုကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ကျွန်းပေါ်များတွင် အိမ်အသစ်များဆောက်လုပ်နိုင်ရန် ပင်လယ်သို့ထွက်ခွာသောအချိန် ဧပြီလကုန်၌ ဆလုံပွဲတော်ကို ကျင်းပ ရန်အချိန်သတ်မှတ်ကြပါသည်။ ကျွန်များပတ်ပတ်လည်တွင် ယာယီအိမ်များဆောက်လုပ်ကြပါသည်။ တံငါသည်များနှင့် ငါးဖမ်းသမားများသ်ာသူတို့၏အချိန်အများစုကို ပင်လယ်ထဲတွင် ကုန်ဆုံးလေ့ရှိပြီးပွဲတော်ကျင်းပသောအချိန်သည်ဆလုံလူမျိုးများကုန်းမြေပေါ်တွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သောအချိန်ဖြစ်သောကြောင့် ထူးခြားသောအချိန်ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဆလုံပွဲတော်သို့လာရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် အနီးနားရှိကျေးရွာများသို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကို ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌သာ ဖိတ်ခေါ်လေ့ရှိပါသည်။ ယဉ်ကျေးမှုကို ချစ်မြတ်နိုးသူများအနေဖြင့် ပွဲတော်တွင် မကောင်းသောနတ်ဆိုးများမရှိစေရန်တိရိစ္ဆာန်များအားယစ်ပူဇော်ခြင်း၊ နတ်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း စသည့် ရှေးကျသည့် ရိုးရာ ဓလေ့များကို တွေ့မြင်ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျင်းပသည့်ရက် – တန်ခူးလဆန်း(၈)ရက်နေ့မှ လဆုတ် (၅) ရက်နေ့အထိ
ကျင်းပသည့်နေရာ – ပဲခူး
ကျင်းပသည့်ကာလ – (၁၃)ရက်
ကျင်းပသည့်ရက် – ဧပြီ(၁၃) မှ (၁၇) ရက်နေ့အထိ(နှစ်သစ်ကူးရက်)
ကျင်းပသည့်နေရာ – မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး
ကျင်းပသည့်ကာလ – (၅)ရက် သို့မဟုတ် (၅)ရက်နှင့်အထက်